संविधान बचाउन कांग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व लिने समय आयो ः डा. भट्टराई – Rajya TV
संविधान बचाउन कांग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व लिने समय आयो ः डा. भट्टराई
काठमाडौं,५ माघ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानमाथि संकट आएको भन्दै त्यसलाई बचाउन कांग्रेसले नै आन्दोलनको नेतृत्व लिनु पर्ने समय आएको बताउनुभएको छ ।
कांग्रेस आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनमा भनेर अलमलमा रहेको भन्दै उहाँले देशको नेतृत्व गर्न निर्वाचन नै कुर्न नपर्ने बताउनुभयो । संसद पुनःस्थापना भए कांग्रेसले नै नेतृत्वको अवसर पाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृती शान्ति प्रतिष्ठानद्धारा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तक्रियामा डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट गरिएको छ, यो संविधानमाथिको प्रहार हो, संविधानलाई जोगाउन अब कांग्रेसले नै आन्दोलनको नेतृत्व लिने समय आयो ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै डा. भट्टराईले अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए र बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै गए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘हामी शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्छौं । बाहिरी हस्तक्षेप भएमा रामनाम जपेर बस्दैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वामपन्थीको खोल ओढेर चरम सामन्तवादतर्फ अग्रसर भएको बताउदै भट्टराईले ओली नवफाँसीवादको अभ्यास गर्दै अघि बढेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सबै अंगलाई धम्क्याइरहेको भन्दै भट्टराईले अदालतसमेत परीक्षाको घडीमा रहेको बताउनुभयो ।